Organizational Documents and Reports - National Federation of the Disabled, Nepal | Leader in Disability Rights Movement in Nepal
Organizational Documents and Reports of National Federation of Disabled, Nepal
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालको विधानले यस संस्थाका सम्पुर्ण गतिविधि र कार्यदिशा निर्दिष्ट गर्दछ। यो विधान वि.स‌. २०५० मा पहिलो चोटी तयार गरिएको हो भने वि.स. २०७५ सालमा पाँचौं संसोधन गरिएको हो। यस विधानमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा यसका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ।